DAAWO:- Axmed Daaci oo Ka horyimid HUB ka Dhigista ka Socota Magaalada Muqdisho & Wuxuu ku Dooday (Video) - Hablaha Media Network
DAAWO:- Axmed Daaci oo Ka horyimid HUB ka Dhigista ka Socota Magaalada Muqdisho & Wuxuu ku Dooday (Video)
HMN:- Gudoomiyihii hore ee Degmada Wadajir, Axmed Xasan Caddow (Axmed Daaci), ayaa mar kale ka hadlay howlgalada Hub ka dhigista ee ka socda magaalada Muqdisho.
Axmed Daaci, waxa uu sheegay in DFS ay isku khaldeyso waxbadan, waxa uuna tilmaamay in marka hore la doonayo inay Hubka ka dhigaan Al­shabaab, Wuxuu sheegay in ayan darro ay noqon doonto in mas’uul ay Hubka ka dhigtay
DFS, ay dhibaateyan Al­shabaab.
Axmed Daaci, ayaa sheegay inay wanaagsan tahay hub ka dhigis in la sameeyo, balse ay marka hore haboon tahay in hubka laga dhigo maleeshiyada Al­shabaab oo weli ku dhex sugan magaalada Muqdisho iyo Gobolada dalka.
Axmed Daaci wuxuu kaloo sheegay hadii Hub ka dhigis ay dhaceyso in muhiim ay tahay in Gobolada dalka oo dhan laga bilaabo, balse aanan lagu soo koobin hal gobol.
Axmed Daaci oo la hadlay Idaacada BBC ayaa yiri “Way fiican tahay hub ka dhigis in la sameeyo, laakiin waxaa fiican marka hore in cadowga hubka laga dhigo, oo awoodda cadowga la wiiqo. Awoodda cadowga markii la wiiqo ka bacdi tuug saqajaanka iyo burcadda hubka laga dhigo.”
Waxa uu intaa kusii daray “Hub laga bilaabayo dadkii uu cadowga beegsanayay ama ciidamadii ama siyaasiyiintii, aniga taasi sax ilama ahan.”